ZeeKwat | Gallery Archives - ZeeKwat
ခရမ်းသီးကို လူတိုင်း စားဖူးပါလိမ့်မယ်။ အနည်းငယ် သက်တဲ့ အရသာဖြစ်ပြီး သားငါးမျိုးစုံနဲ့ ချက်စားကြတာ ရှိသလို ခရမ်းသီးသက်သက်ကို အချို/အစပ် ချက်စားရင်လည်း အရသာ အလွန်ရှိပါတယ်။ ခရမ်းသီးမှာ လူကို
အိပ်စက်ချိန်ဟောက်ခြင်းဟာ အမျိုးသားတွေမှာသာအဖြစ်များတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် အမျိုးသမီးမှာလည်း ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အသက် (၃၀) နဲ့ (၆၀) ကြား အမျိုးသား ၄၄% နဲ့ အမျိုးသမီး ၂၈% မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ ဟောက်တယ်ဆိုတာ ဟောက်တဲ့လူကသာ
၁. ကြက်သားအာလူးဟင်း + ပဲကုလားဟင်း+ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်+ ဘာလချောင်ကြော် ၂. ငါးမွှေ+ ဂေါ်ရခါးသီးချဉ်ရည်+ ငရုပ်ပွကြော် ++ ဘာလချောင်ကြော် ၃.ငါးဖယ်ငါးဆုတ် + ကျောက်ဖရုံသီးချဉ်ရည် +ရုံးပတီသီးကြော်
အလှအပကြိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တွေက ဆားဝက်ခြံပျောက်ဖို့အတွက် ညအိပ်ရာဝင်တဲ့ အခါ မျက်နှာမှာ သံပရာ သီး ကိုပွတ်လိမ်းပြီး မျက်နှာကိုပြောင်ချောအောင်ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ သံပရာသီးက အက်စစ်ဓာတ်ကို အများဆုံးထုတ်တဲ့အသီးဖြစ်တာကြောင့် လိုတာထက်ပိုရင် အရေပြားကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
လက်ထပ် ပြီးစမှာ ၃ လခံထိုးဆေး သုံးသင့်သလားဆိုတာကို မိန်းကလေးတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်….
လက်ထပ်တော့မယ့် စုံတွဲတွေအတွက် အသုံးပြုလို့ရမယ့် သားဆက်ခြားနည်းတွေအကြောင်း ရေးလာခဲ့တာ ၃ ပုဒ်ရှိပါပြီ။ ဒီလအတွက် နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ ခုမှ မင်္ဂလာဆောင်မယ့်၊ ကလေးတစ်ခါမှ မမွေးဖူးသေးတဲ့ မိန်းကလေးအနေနဲ့ ၃ လခံဆေး
အစာစားပြီး သွားမတိုက်ဘဲ ညအိပ်ယာဝင်ရင် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးရှိသလဲဆိုတာကို လူတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်…
တစ်နေ့တာလုံး ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပင်ပန်းနေပြီမို့ ညဘက်မှာ သွားတိုက်ဖို့ မေ့နေတတ်ကြသလို၊ ညဘက်မှာ အစာစားပြီး သွားမတိုက်ဘဲ အိပ်မိတဲ့ နေ့တွေလည်း အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ရှိဖူးကြမှာပါ။ ညဘက်သွားမတိုက်ဘဲ အိပ်ယာဝင်တာဟာ သင့်ခံတွင်းအတွက်
ကြက်သွန်ဖြူ မီးဖုတ် (သို့) မီးကင်ပြီးစားသုံးပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
ကြက်သွန်ဖြူဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့အစားအစာတစ်ခုပါ။ ကြက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့ သဘာဝ ဂုဏ်သတ္တိတွေဟာ ရောဂါများစွာကို ကုသပေးနိုင်ပြီး ဆေးဝါးအဖြစ်လည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျယ်ကျယပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ ကိုလက်စထရောပမာဧကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ မီးဖုတ်ထားတဲ့ (သို့) မီးကင်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ
အဆီပိုတွေ ယူပစ်သလို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
မိန်းကလေးတွေရဲ့ အဓိကရန်သူက ခါးအဆီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခါးအဆီပျောက်နည်း များစွာရှိမယ်။ ဒီထဲက အလွန်သိသာတဲ့နည်းက သခွားသီးနဲ့ တရုတ်နံနံကို သုံးပြီး ခါးအဆီဖယ်ရှားတဲ့နည်းဖြစ်တယ်။ သခွားသီးက အဆိပ်အတောက်ဖယ်ရှားရာမှာ အသုံးဝင်တယ်။ အရေပြား
ရင်သားကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည့် အစားအစာများကို သိထားသင့်ပါတယ်….
<<< Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် >>> အမျိုးသမီးများ အဆီပါသော အစားအစာများကြောင့် အသက်ရလာချိန်တွင် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်စေပါသည်။ သုတေသီများ၏ လေ့လာတွေ့ ရှိချက်အရ အမျိုးသမီးများသည် အဆီများသော အစားအစာများကိုပုံမှန်မဆင်မခြင်စားသုံးပါက အနာဂတ်တွင် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု သိရသည် ။
ခါးနာသက်သာစေမည့် သဘာဝကုထုံးနည်းလမ်းကို အများသိအောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်….
<<< Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် >>> အထိုင်များ၍သော်၎င်း၊ အားကစားတစ်ခုခုကြောင့်သော်၎င်း ခါးနာနေလျှင် အောက်ပါ သဘာဝကုထုံးနည်းဖြင့် သက်သာအောင် ကုသနိုင်ကြပါတယ်။ အဲဒီနည်းကတော့ သင်္ဘောရွက်ဖြင့် ကုသတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ညမအိပ်ခင် သင်္ဘောရွက် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ ခပ်သန့်သန့်လေးကို တစ်ရွက်